नेपाल बाहिरियो, माल्दिभ्ससँग सोझो सेटमा पराजित | Hamro Khelkud
कोहलीको कीर्तिमानसँगै भारतको सहज जित
भलिबल खेलाडी कोपिला नेदरल्यान्ड्स जाने
यू १८ सँगै प्रशिक्षक श्रेष्ठलाई अवसरसँगै चुनौती
नमुना बौद्ध मास्र्टसमा आशिष र नविन अगाडि
सागमा फुटबलको जिम्मेवारी दिन सहाराको आग्रह !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– लगातार दोस्रो खेलमा पराजित हुँदै नेपाल एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्प्यिनसिपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि जित्नै पर्ने बाध्यताकाबीच माल्दिभ्सविरुद्ध बुधबार उत्रेको नेपालले ३–० को सोझो सेटमा हार बेहोर्दै च्याम्पियनसिपको अघिल्लो चरण पुग्नबाट बञ्चित रह्यो । माल्दिभ्स २५–२२,२५–२१ र २५–१४ को सोझो सेटमा विजयी भएको थियो ।
तीन वर्षअघि माल्दिभ्सलाई नै हराएर यहि प्रतियोगितामा कास्य पदक जितेको नेपाली टोलीले यसपटक समूह चरणका दुवै खेल लगातार गुमाएको थियो । पहिलो खेलमा पनि नेपाल कीर्गिस्तानसँग ३–० ले पराजित भएको थियो । नेपाललाई हराएसँग समूह एको उपविजेताका रुपमा माल्दिभ्स सेमिफाइनलतर्फ अघि बढेको थियो ।
यसअघि ६ पटकको भेटमा नेपालले ४ खेल र माल्दिभ्सले दुई खेलमा जित हासिल गरेको थियो । तर, यसपटक घरेलु कोर्टमै नेपाली टोली कमजोर देखियो ।
लगनखेलस्थित नेपाली सेनाको कभर्ड हलमा भएको खेलमा झन्डै ४ हजार दर्शकलाई निराश पार्दै नेपाली टोली च्याम्पियनसिपको अघिल्लो चरण पुग्न असफल भएको थियो ।
बुधबार नै भएको खेलमा लगातार तीन खेल जित्दै उज्वेकिस्तान सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो । समूह एबाट पनि कीर्गिस्तान यसअघि नै विजेताका रुपमा अघि बढिसकेको छ । अब नेपालले ५ औं स्थानका लागि समूह बीको तेस्रो टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
हाजार्ड पिएसजीविरुद्ध खेल्ने !
अल्ट्रा धाविका मिराले गरिन् पसल उद्घाटन
आठ पटक सम्म बालोन डी’ओर जित्ने रोनाल्डोको लक्ष्य !
सुनिलले चिलीमा कराते वान सिरिज खेल्ने